Ururka midnimo oo soo dhaweeyey go’aanka gudiga KMG ee Doorashooyinka Puntland – Radio Daljir
Maarso 11, 2013 2:44 b 0
Garoowe,11,March,2013 Guddiga doorashooyinka dawladda Puntland ee ku meelgaarka ah,ayaa shalay oo bisha March ahayd 10, guddoonsiiyey ururada siyaasadeed ?shahaadooyinkii ogolaanshaha ee ururnimada,Ururka Midnimo wuxuu ka mid ahaa ururadaas la guddoonsiiyey shahaadada,Inkasta oo aan wax ka tirsanayney habkii loo maamulay kala-saarista ururada, haddana waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqonay ururada sharciga ah ee xilligan Puntland ka hanaqaaday. Hase ahaatee, waxaa jira caqabado badan oo weli hortaagan habsami u socodka hannaanka doorashhyinka ee Puntland, kuwaasoo isugu jira caqabado aan horay uga hadalnay iyo kuwo haatan ku soo kordhay oo xagal-daacin kara geeddi socodka dimuqraadiyadda Puntland.
Caqabadihii hore waxaan kaga hadalnay war-saxaafadeedkii aan soo saarnay 20 feberaayo, kuwaasoo ay habboonayd in la meelmariyo ka hor furitaanka xisbiyadda sida tirakoobka dadka, hub-ka-dhigista, kalaxadeynta goboladda iyo degmooyinka & magacaabista maxkamadda dastuuriga ah. Kuwaasoo la?aantood doorashadu noqonayso mid dhicis ah oo aan natiijaddii laga rabey laga gaarin.
Caqabadaha cusub ee hadda soo biirayna waxaa ka mid ah wax ka bedelka la damacsan yahay in lagu sameeyo xeerka doorashooyinka golayaasha deegaannada Puntland. Waxaa golaha wakiiladda loo gudbiyey qoraal la doonayo in xeerka looga saaro aqoonsiga Puntlander-nimada iyo diiwaangelinta codeeyayaashu isaga diiwaangelin lahaayeen goobta ay ka codaynayaan. Kuwaasoo wadada u xaari kara codayn sababi karta ku-shubasho iyo musuq-maasuq aan loo meeldeyin. Intaas waxaa raaca, waqtiga oo ciriir ah iyo jadwalkii guddiga doorashooyinku degsadeen oo dib isu riixey. Waxayna hadda u muuqataa inaysan ku dhammayn karin hawlaha u yaal sidii ay u qorshaysteen.
Gabo-gabadii, inkastoo ururka MIDNIMO u diyaargaroobey ka qaybqaadashada doorashooyinka golayaasha dawladda ee Puntland ee mustaqbalka, haddana waxaa soo foodsaaray caqabado waaweyn oo u baahan in xal-waara laga gaaro. Ururka MIDNIMO-na aragtidiisa ku wajahan caqabadahan iyo sida loo xallin karo, wuxuu ka soo saari doonaa ?war-murtiyeed, ka dib marka golayaasha ururku go?aan ka gaaraan maalmaha soo socda Insha allaah.